Posted by Aung Htut at 11/30/2011 01:19:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 11/29/2011 01:27:00 PM9comments
Posted by Aung Htut at 11/28/2011 10:50:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 11/28/2011 07:08:00 AM4comments
Posted by Aung Htut at 11/27/2011 09:11:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 11/27/2011 12:48:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 11/26/2011 09:49:00 AM6comments
Posted by Aung Htut at 11/25/2011 10:23:00 PM3comments
တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းကျားကျီး ပြည်သူ့ အပန်းဖြေ တောအုပ်ကလေးမှာတော့ မှန်သားအထူ ၂.၅ လက်မရှိပြီး ၃ပေကျယ်တဲ့ မှန်လမ်းကလေးရှိပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီလမ်းကလေးဟာ မြေပြင်ကနေ ၁၄၃၀ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ မတ်စောက်လှတဲ့ ထျန်မန်း တောင်စောင်းပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာမို့လို့ ဖြတ်သွားသူတိုင်း အသည်းယားချင်စရာပါ။ ထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုက ဒီမှန်တံတားပေါ်ကို ဖြတ်သွားမယ့်လူတိုင်းရဲ့ ဖိနပ်မှာ အ၀တ်စွပ်ပြီးမှ ဖြတ်သန်းစေပါသတဲ့။ ဒါဟာ သန့်ရှင်းရေးသမားတွေ အပန်းတကြီး သန့်ရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကြည့်ရာတာတော့ သန့်ရှင်းရေးသမားတောင် ကြောက်လို့ မှန်သွားမတိုက်ရဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ရင်ထိတ်သည်းဖိုစရာကောင်းတာကတော့ မြင့်လို့လို့ မထင်မိပါဘူး။ တရုတ်တွေရဲ့ ဘာပစ္စည်းသုံးထားသလဲဆိုတာ တွေးရင်း ဒီမှန်တံတားပေါ်လျှောက်ရင် ဒူးတွေဘာတွေ တုန်လာနိုင်ပါတယ်။ ကဲအောက်က ဓာတ်ပုံကလေးမှာတော့ တရုတ်က ရင်ထိတ်သည်းဖို မှန်တံတားလေးကို ရှု့စားကြပါကုန်။
Posted by Aung Htut at 11/25/2011 08:34:00 PM3comments
ဗြိတိန် The Telegraph ကတော့ အင်္ဂလန်က လူတွေဟာ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ပြောတဲ့ အရေအတွက် နည်းလာပါတယ်တဲ့။ ဒီအစား တစ်ခြားစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ “ta” တို့ “cool” တို့ သုံးသလို ပြင်သစ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့ “merci” ကိုလည်း အစားထိုး သုံးစွဲလာပါသတဲ့။
တစ်နှစ်ကို လူတစ်ယောက်ဟာ “Thank You” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အကြိမ် ၅၀၀၀ လောက်ပြောကြပါတယ်၊ ဒါဟာ တစ်ရက်ကို ပျမ်းမျှ ၁၃ ကြိမ် ၁၄ ကြိမ်လောက်တော့ “Thank You” ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးသေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေ့ါလေ။ ဒါဟာ လူမှု့ဆက်ဆံရေးစကားတွေ တိုးတက်လာတဲ့ ရလဒ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ၄၀%ကတော့ သူတို့ဟာ သူ့တို့အရင် မျိုးဆက်တွေထက်စာရင်တော့ “Thank You” လို့ ပြောတာ ပိုနည်းသွားတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဗြိတိန်က အစားအသောက် ကွန်ရက် ရုပ်သံလိုင်းက “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေ့” ဆိုပြီး အစီအစဉ်လုပ်တာတောင်မှာ အယောက် ၂၀ မှာ ၁ ယောက်က “nice one” လို့ ပြောသွားပါသေးတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ၉၅% ကတော့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု့ဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ၁၀% သော ဗြိတိန်လူမျိုးများကတော့ သူတို့ကို သူတို့ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ယုံကြည့်ကြပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 11/24/2011 08:16:00 AM5comments
အရင်ပိုစ့်တုန်းက စနစ်အကြောင်းလေး စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ ခုတလော ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး။ စဉ်းစားရင်းနဲ့ကို စဉ်းစားဖြစ်နေတယ်။ ခုလည်း လှိုင်းအကြောင်းစဉ်းစားဖြစ်နေတယ်။ ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်း၊ တတိယလှိုင်း၊ ခု စတုတ္ထလှိုင်းက ကမ္ဘာကြီးကို ရိုက်ခတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အသည်းအသန် လှိုင်းတွေကြားထဲမှာ အလဲလဲ အပြိုပြို။
မနေ့ကပဲ တွေ့လိုက်သေးတယ် Google ကုမ္ပဏီက Google book ကို Samsaung နဲ့ Accer ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုရဲ့ Harware ကိုသုံးပြီးတော့ ထုတ်လိုက်တယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ့လေ.. ပြောရရင် သို့ပေမယ့် ဘာမှ install လုပ်စရာမလို၊ virus စစ်စရာမလို၊ စက်ဖွင့်လိုက်လို့ ၁၀ စက္ကန့်ဆိုရင် သုံးလို့ရပြီ။ အလွန်မြန်၏။ ဖန်သားပြင်မှာ ဘာမြင်ရမလည်း Google Chrome Browser ဒါပဲ။ သို့ပေမယ့် အဲ့ဒီအထဲမှာ အစုံပါသည်။ ရုံးလုံးငန်းဆိုင်ရာ စာစီစာရိုက်၊ စာရင်းဇယား၊ ဘာညာ အစုံလုပ်လို့ရမည့် အသုံးဝင်သော Software လေးတွေ Google Market ထဲမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရုံ။ ပြီးရင် တန်းသုံး။ ဟိုးအရင်တုန်းကလို ဟိုအခွေဝယ်၊ ဒီအခွေဝယ် ဒါမျိုးမရှိတော့ ဟုဆိုသည်။ အရင်တုန်းက ကွန်ပျူတာတွေက Wifi တို့ ဘာတို့နဲ့ အင်တာနက်ချိတ်လို့ရသည်၊ ခုတော့ ထိုစက်ထဲတွင် 3G ပါပါလာသည်။ အိမ်မှာ ၀ိုင်ယာလက် ရှိမှ သုံးလို့ရသည်မဟုတ်တော့ နေရာတကာသုံးလို့ရတော့မည်။ ဘယ်နေရာမှာ သွားပြီး အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားမလည်း? Google က provide လုပ်ထားတဲ့ Cloud Server ပေါ်တက်သိမ်း၊ လိုချင်တဲ့အခါ ပြန်ဆွဲချ သုံးလိုက်ယုံသာရှိသည်။ အလွန်ကောင်းသည်၊ မြန်သည်၊ ခေတ်ပိုမှီလာသည်၊ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒါတွေသိအောင် လေ့လာရပြန်သည်။ နောက်တစ်လလောက်နေရင် နောက်တစ်ခု ထပ်ထွက်လာဦးမည်။ ဘာလည်း ဘယ်လိုဟာမျိုးလည်း ဘာတွေပါမှာလဲ။ တီထွင်မှု့တစ်ခု၏ သက်တမ်းသည် မည်မျှခံမည်နည်း ကျွန်တော်မသိ။
Posted by Aung Htut at 11/23/2011 06:18:00 PM6comments
မြန်လှသည်၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်တွဲ ပြီးတော့ ဘ၀လမ်းကို အတူလျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ့ကိုစတွေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်ကနေပြီးတော့ သမီးရည်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်အထိ ၈ နှစ်လောက် ကြာခဲ့တယ်။ ချစ်သူသက်တမ်းကလည်း ၆ နှစ်ကျော်ကျော် ဟော ခုတော့ လက်ထပ်တာလည်း ဘာလိုလိုနဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြန်ပြီ။
စတွေ့တော့ ကျွန်တော်က ၅ တန်း၊ သူကလည်း ၅ တန်း မြင်ကထည်းက ဘယ်လိုခံစားချက်ရယ် မပြောတတ်ဘူး တစ်နေ့ သူ့ကို ယူမယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ကိုတွေ့ပြီး ၇ နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်ကြောင်းပြောဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုတွေ့ပြီး ၈ နှစ်မြောက်မှာ သူနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ၆ နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ငါ့ကို လက်ထပ်ပါလို့ ကျွန်တော်သူ့ကို ပြောတယ်။ သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ ငါပြင်ဆင်သလောက်တော့ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ တစ်နေ့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ စခဲ့ကြတယ်။
ချစ်သူဘ၀နဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ ဘာကွာသွားလည်း? အားလုံးကွာသွားတယ်။ ပိုပြီး ရင်းနှီးလာတယ်၊ မျက်နှာဖုံးစွပ်တွေ ခွာကြတယ်။ တစ်ယောက်စိတ်ဓာတ်ကို တစ်ယောက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သိလာတယ်။ ပိုပြီး ငြှိနှိုင်းယူရတွေများလာတယ်။ တာဝန်တွေ ခွဲဝေယူလာကြရတယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်နိုင်အောင်ထမ်းဖို့လည်းလိုတယ်၊ မဟုတ်ရင် တရွတ်တိုက်ကြီးနဲ့ ခရီးက ဖင့်တယ်။ လေးတယ်၊ နှေးတယ်။ ချစ်တာ ဟာ ချစ်တာပေါ့…၊ ချစ်လို့လည်း ဘ၀စဖို့ သဘောတူကြတာပေါ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လက်ထပ်တာဟာ တစ်ဦးကို တစ်ဦးဖေးမတာ။ တစ်ဦးက တစ်ဦးကို မှီခိုတာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ချင်းစီလည်း အမှီအခိုကင်းနိုင်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်မရွေး သေသွားနိုင်တယ်။ ရင်သွေးလေးတွေရလာလို့ တစ်ဦးဦး သေဆုံးသွားခဲ့ရင် ဒီရင်သွေးလေးတွေအတွက် ကျန်ရစ်သူဟာ အသင့်ဖြစ်နေရမယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှု့ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု့ စတဲ့ အိမ်တစ်ခုရဲ့ တာဝန်အားလုံးကို ဆက်လက် အောင်မြင်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်။ ဒီရင်သွေးကို ဘယ်လောက် ဆိုးတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ကြုံနေပါစေ ကိုယ်ထက် တော်တဲ့၊ ကိုယ့်ထက် သာတဲ့ နေရာကို ရောက်အောင် အဖေရော၊ အမေရောက ပံပိုးပေးနိုင်ရမယ်။ ဒီအတွက် စီမံကိန်း ရှိသင့်တယ်။ ကျွန်တော်သေသွားလို့ သူ့ကို ဒုက္ခ အများကြီးပေးခဲ့သလိုမျိုး မဖြစ်စေရသလို၊ သူသေသွားလို့လည်း ကျွန်တော် ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေပြီး ကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကစပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အခက်အခဲတွေ ကျော်ဖြတ်ကြတယ်၊ အတူတူ ရယ်မောခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် လက်ထပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးနေစဉ် အချိန်မှာပဲ ငါတည်ထောင်တဲ့ မိသားစုအပေါ်မှာ ငါသည် တာဝန်ကျေစေရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ ထည့်ထိုးထားခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော် တာဝန်ကျေအောင် ကြိုးစားတယ်။ သူ့ကိုလည်း နားလည်းအောင်ရှင်းပြတယ်။ သူ့ကလည်း သူ့ယူဆချက်တွေကို ပြောပြတယ်။ လက်မထပ်ခင်ကထည်းက သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ရန်ဖြစ်ရင် အော်လားဟစ်လား မလုပ်ဖို့ သဘောတူညီချက်ပါ။ ဒါကိုလည်း ခုထိ နှစ်ယောက်စလုံး စောင့်ထိန်းနေကြတုန်းပဲ။ နောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ စောင့်ထိန်းသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည့်တယ်။ သူက ကျွန်တော် သူ့ကို “မင်း” လို့ခေါ်တာ မကြိုက်သလို၊ ကျွန်တော်ကလည်း သူ ကျွန်တော့်ကို “နင်” လို့ ခေါ်တာကို လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ ဒီအတွက် မည်မျှ စိတ်ဆိုးနေသည်ဖြစ်စေ လေသံကို ထိန်းသလို အဲ့ဒီ စကားလုံးတွေကိုလည်း မသုံးနှုံးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းစိတ်ဆိုးလာကြရင် စကားမပြောတော့ပါဘူး။ ပြောတိုင်းမှာ အမှားပါနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဒေါသထိန်းနိုင်တဲ့ အချိန်ကျတော့မှ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရန်ဖြစ်ရင် အသံတိတ်ဖြစ်တယ်လို့ အိမ်က လူတွေက ပြောတတ်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်လာပြန်ပြီ။ ခဏလေးလိုပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က သူ့ကို ဘာပေးနိုင်ခဲ့သလည်း ဘာမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနှစ်ရော ဘာပေးနိုင်လည်း၊ လူကိုယ်တိုင် တောင် အနားမှာမှ မရှိတာ ကျန်တာ ဘာပေးနိုင်ဦးမှာတုန်း။ ကျွန်တော်ချစ်တယ်၊ သူ့ကို ချစ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ အနည်းဆုံး ဒီစာလေးတော့ ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ပဲ သူ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 11/22/2011 05:49:00 PM 10 comments
Posted by Aung Htut at 11/21/2011 12:32:00 AM5comments
Posted by Aung Htut at 11/20/2011 01:06:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 11/19/2011 07:17:00 PM7comments
ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုလာမေးရင်တော့ ရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ယုံလားဆိုတော့ ယုံတယ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ မယုံဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူနေသူ နေကြတယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ်ဟာကိုနေတယ်ပေါ့လေ။ ဥစ္စာစောင့်တွေကြောင့် စီးပွားတက်တာ ဟုတ်လားမေးရင်လည်း ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး အလုပ်နဲ့ ရတဲ့ ငွေကိုပဲလိုချင်တယ်။ ဘယ် ပစ္စည်းမှ အလကားမရတာ၊ ဥစ္စစောင့်က စီးပွားတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်လည်း သူတစ်ခုခုလိုချင်လို့ လုပ်ပေးတာဖြစ်မှာပေ့ါ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်က သူ့အတွက် အလုပ်အပိုတွေလုပ်ပေးရဦးမယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူ့ဟာသူနေ ကိုယ်ဟာကိုယ်နေလို့ပဲ ကျွန်တော်က ခံယူတယ်။
ဥစ္စာစောင့်တစ်ကယ်ရှိတာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ကျွန်တော် ငယ်ငယ်လေးထဲက မယုံတာပါ။ ဗိုလ်တစ်ထောင်က မြနန်းနွယ်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာစောင့် အကြောင်လည်း ကြားဖူးပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေမဟုတ်လေတော့ ယုံရခက်ခက်ကြီးရယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထင်တယ် ကျွန်တော် ၇ တန်းလောက်မှာ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်လေးတစ်ခု တွေ့ဖူးပါရဲ့။ ကိုယ်တွေ့ဆိုပေမယ့် အမေက ကျွန်တော်ငယ်သေးတာကို စိုးရိပ်ပြီး ခေါ်မသွားလို့ နောက်ပိုင်းမှာ အမေ့ဆီက ပြန်ကြားရတာတွေကိုပဲ နားထောင်ရတာပါ။ အဖြစ်ကဒီလို။
Posted by Aung Htut at 11/19/2011 01:22:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 11/18/2011 10:51:00 PM4comments
“ပညာရှာ ပမာသူဖုန်းစား”၊ “ပညာရွှေအိုး လူမခိုး” စတဲ့ စကားပုံလေးတွေဟာ ပညာရဲ့ တန်ဖိုးကိုဖော်ပြတဲ့ စကားပုံလေးတွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှ “ရွှေအိုးရှိမှ ပညာရ” တို့ဘာတို့ ဖြစ်လာတာကိုတော့ ထားလိုက်ပါတော့လေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုပိုစ့်လေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း ပိလိရွာကလေးက ကလေးငယ်လေးတွေ စာသင်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ အန္တရယ်တွေကြားထဲကနေ ကျောင်းကိုသွားရတယ်ဆိုတာလေးပါ။ နှစ်တိုင်း ကျောင်းဖွင့်ချိန်ဆိုရင် ပိလိ ရွာကလေးကို ဆရာမတွေနဲ့ အစိုးရ အရာရှိတွေဟာ အဲ့ဒီရွာက ကလေးငယ် ၈၀ လောက်ကို ကျောင်းကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ ရောက်လာလေ့ရှိပါသတဲ့။ ဒီကလေးငယ်ကလေးတွေဟာ ရွာကနေပြီးတော့ ကျောင်းကိုရောက်ဖို့ ၁၂၅မိုင် ခရီးကြမ်းကို ဖြတ်သန်းရပါသတဲ့။ ဒီဖြတ်သန်းရတဲ့ ခရီးတွေက တော်တော့်ကို စွန့်စွန့်စားစား သွားရတာပါ။ သူတို့လေးတွေဟာ ကျောင်းကိုရောက်ဖို့ ရေခဲနေတဲ့ မြစ်လေးစင်း၊ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ပေ ၆၅၀ ကျော်ရှည်တဲ့ ကြိုးတံတား ၁ ခု၊ ပျဉ်ပြားတစ်ချပ်စာသာရှိတဲ့ တံတားတွေ စတာတွေကို ဖြတ်သန်းရပါသတဲ့။ ဒါခရီးကို ပြီးဆုံးဖို့ အချိန် ၂ ရက်ကြာပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 11/18/2011 05:31:00 PM3comments
ဒီဟာသလေးကတော့ ကျောင်းနေဖက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဇော်သန်း ပြောပြတဲ့ ဟာသလေးပေါ့။ ပုံပြင်မပြောခင် ဇော်သန်းဆိုတာက ကျွန်တော်နဲ့ ရေကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လုံးလုံး တစ်ဆောင်ထဲနေကြထဲ သူငယ်ချင်းတွေထဲကတစ်ယောက်။ သူက ဒလ ဟိုဘက် တွံတေး ဇာတိ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် သူတို့ရွာသွားလည်၊ ဘောလုံးကန်၊ ထန်းရေသောက် ပျော်စရာအတော်ကောင်းသား။ ဇော်သန်းရဲ့ အဖေနဲ့ အမေကလည်း အတော်သဘောကောင်းသဗျ။ ကျွန်တော်တို့လာရင် ၀က်သားကို လုံးချက်ချက်၊ ငပိရည်နဲ့ တို့စရာနဲ့ လွေးလို့တယ်ကောင်း။
ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ အဆောင်ကို လာလည်တတ်သေးတယ်။ လာရင်တော့ ဟင်းတွေ ထမင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဝစားရတာပေါ့ဗျာ။ ဇော်သန်းရဲ့ အဖေကြီးလာလည်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဘောလုံးဂျာနယ် ဖြန့်ခင်းပြီးတော့ လက်ချာရိုက်လိုက်တာ ဦးလေးကြီးလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် လေပစ်၊ ဟိုဘက်ကကောင်းတယ်၊ ဒီဘက်က ကောင်းတယ်နဲ့ ဘောလုံးကို ၀ါသနာပါသွားတာပဲ။ လူကြီးကိုလည်း မချန် အဲ့သလို ပျက်စီးကြတာ။ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းကဆို ဖိုင်နယ်ပြီးမှ ရွာပြန်တဲ့အထိကို ဖြစ်ရော။
အဲ့ နီတာ ပစ္စည်းတစ်ခုမှ မပါဘူးဆိုတာက တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ဗျ။ သူတို့ရွာမှာ ကိုနီတာဆိုတဲ့ လက်သမားကြီးရှိတယ်။ လက်ရာသေသပ်တာရယ်၊ အလုပ်ကို စနစ်တကျ လုပ်တာရယ်ကြောင့် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း အိမ်ဆောက်တာတို့ အိမ်ပြင်တာတို့ဆိုရင် ကိုနီတာကြီးက လက်စွဲပေါ့။ ကိုနီတာကြီးကလည်း အိမ်ဆောက်လို့ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ပြင်လို့ပြီးလို့ အပိုကျန်တဲ့ ၀ါးလေးတွေ၊ ဓနိလေးတွေကို အိမ်ရှင်ဆီခွင့်တောင်းပြီး ယူတယ်ခင်ဗျ။ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူ့အိမ် အလှဆုံးလဲဆို ကိုနီတာကြီးအိမ်က အသပ်ရပ်ဆုံး။ သပ်ရပ်ဆို ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်သမားကိုး။ ဓနိမိုးဆိုလဲ ကျိုးတိုးကျဲတဲမဟုတ်ဘူး၊ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်၊ ထရန်ကာ၊ ကြမ်းခင်း အားလုံးပြောစရာကို မရှိအောင် သေသေသပ်သပ်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ ကိုနီတာကြီးအိမ်ကို အားလုံးက ချီမွမ်းကြတာပေါ့။ တစ်နေ့တော့ ကိုနီတာကြီးအိမ်မီးလောင်ပါလေရောတဲ့။ မီးလောင်တော့ ရွာသားတွေလည်း အပြေးအလွှား ကိုနီတာကြီးအိမ်ဖက်ကို ရေပုန်းတွေ ဆွဲပြီး ပြေးကြတာပေါ့လေ။ ဟိုလည်းရောက်ရော မီးကတော်တော်ကြီးနေတော့ သတ်လို့ကလည်းမရ။ တစ်အိမ်လုံးလောင်ပါလေရောပေါ့လေ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုနီတာကြီးကတော့ အိမ်ပေါ်ဒ ဒန်အိုး ဒန်ခွက် အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ဆောင့်ကြောင့်ကြီးထိုင်၊ ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးကိုဖွာရင် သူ့အိမ်မီးလောင်တာကို ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ကြည့်နေလေရဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ရွာသားတွေလည်း ဟေ့ ကိုနီတာ ခင်ဗျားနှယ် အိမ်မီးလောင်တာကိုမှ ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေရတယ်လို့ ဆိုလေတော့ ကိုနီတာကြီးကပြန်ပြောသတဲ့။
“လောင်ပလေ့စေ….. အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာ နီတာ့ ပစ္စည်း တစ်ခုမှ မပါဘူးတဲ့ဗျား”
ရယ်ဖို့လည်းကောင်းသလို ကိုနီတာရဲ့ စည်းကမ်းရှိပုံလေးကိုလည်း သဘောကျလှပါတယ်။ သူများအိမ်တွေ ဆောက်ရင်း ပိုတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သူ့အိမ်ကို မွမ်းမံတယ်ဆိုပဲ၊ ဓနိတစ်ချပ်ရရင် သူ့အိမ်က သိပ်မကောင်းတဲ့ ဓနိနဲ့ လဲတယ်၊ ၀ါးတစ်လုံးရ ၀ါးတစ်လုံးနဲ့ နောက်ဆုံး တစ်အိမ်လုံး သူ့ပစ္စည်း ဘာမှ မပါတော့ဘူး တဲ့။
Posted by Aung Htut at 11/17/2011 09:35:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 11/17/2011 12:45:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 11/16/2011 05:50:00 PM0comments
Posted by Aung Htut at 11/16/2011 05:32:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 11/14/2011 12:53:00 PM 11 comments
၆ မိနစ်စာ ဖြစ်ရပ်မှန် သီချင်းလေးပေမယ့် ရင်နင့်အောင် ခံစားရတယ်။ ခွေးဆိုတာက သခင့်အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ သစ္စာရှိတယ်၊ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။ ဒီ သီချင်းလေးထဲမှာတော့ မာရီယာဆိုတဲ့ ဂျပန်က ခွေးမလေးရဲ့ အကြောင်း ကိုမြင်ရမှာပါ။ ကြည့်ပြီးတော့ ရင်ထဲကို ထိတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်က။ Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှဲထားတာတွေ့လို့ သိမ်းထားတဲ့ အနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
Posted by Aung Htut at 11/13/2011 08:44:00 PM2comments
Posted by Aung Htut at 11/13/2011 08:02:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 11/13/2011 09:18:00 AM6comments
၂၀၀၅ ခုနှစ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှု့တွေနဲ့အတူ ဟွန်ဒါရဲ့ အာစီမို ၂၀၁၁ စက်ရုပ်လေးပါ။ ဒီစက်ရုပ်ကိုတော့ ဟွန်ဒါရဲ့ သုတေသန ဋ္ဌာနတည်ရှိရာ တိုကျိုမြို့မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လူအသွင် စက်ရုပ်ကလေးဟာ လူတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်အောင် တီထွင်ထားတာပါ။
အခု ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် မွန်းမံထားတဲ့ စက်ရုပ်ကလေးမှာတော့ စက်ရုပ်ရဲ့ လက်တွေဟာ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းခြင်းစီပါ လှုပ်ရှား သိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို အာစီမို စက်ရုပ်ကလေး အချိုရည်ဘူးအဖုံးကိုဖွင့် ခွက်ကလေးကိုကိုင်ပြီး အချိုရည်ငှဲ့ပြပုံနဲ့ ပြသခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အာစီမိုရဲ့ ပြေးအား ပိုမိုမြန်ဆန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က တစ်နာရီကို ၄ မိုင်နှုန်းပြေးနိုင်တာကနေ အခု တစ်နာရီကို ၅.၇ မိုင်နှုန်းပြေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးလဲ ခုန်တတ်သေးသလို၊ စုံလိုက်လည်း ခုန်တတ်ပါပြီ။
Posted by Aung Htut at 11/11/2011 06:18:00 PM5comments
ပါကစ္စတန် ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျမှာ ပိတ်ပင်မယ့် စကားလုံးတွေ...